ရထားလက်မှတ်တွေတွင်သင့်ငွေကို Save ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > ရထားလက်မှတ်တွေတွင်သင့်ငွေကို Save ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသိကောင်းစရာများ
ဥရောပအပူဆုံးတဦးအဖွစျဖျောပွနိုငျ ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု ဒီလောကအတွင်းကမကြာခဏသင်တို့ပတ်လည်ကျင်လည်ကျက်အဲဒီမှာတစ်ဦးစျေးပေါမှုနှုန်းမှာသင့်ရဲ့ခရီးသွားခံစားနိုင်ကပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါကြေညာချက်တွင်သင်သည်အားဖြင့်သွားလာလျှင်ယခုသင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျအဖြစ်လုံးဝမှန်ပေ ဥရောပတစ်လွှားမီးရထား. ဥရောပတိုက်တွင်ရထားစီးအမှန်တကယ်သင်စိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသောအတူလေးရယ်မှသဘာဝတရား၏ဂုဏ်အသရေကိုစူးစမ်းနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ပျော်စရာများမှာ ရှုခင်းများ, ကျေးရွာပေါင်း, တောင်များ, နှင့်သင့်စဉ်အတွင်းရေတံခွန်များ ခရီးသွားခြင်း. ယနေ့ခေတ်သင်တို့အပေါ်မှာအကျိုးအမြတ်ဈေးလျှော့ပေးသော်လည်းနိုင်ပါတယ် early train ဘွတ်ကင် နှင့်သင်သည်သင်၏ရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်လျှင် စျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေ သင့်ရဲ့အဘို့ ဥရောပ ခရီးစဉ်, ဤ blog ရုံသငျသညျအဘို့ဖြစ်၏. ဒီနေရာတွင်ယခုဘာလုပ်သင့်တယ်စာရင်းတစ်ခုဖွင့်;
There are many European websites that offer lucrative discounts on early booking from time to time. If you are lucky enough, သငျသညျအထိရနိုင် 50% off on popular routes like Paris-Brussels-Amsterdam. So now you have to often check the Save A Train website to avail the lucrative deals.
များစွာသော website တွေမှာယခုအစောပိုင်းကြိုတင်စာရင်းသွင်းပေါ်နှင့်သင်တစ်ဦးစျေးသက်သက်သာသာမှုနှုန်းမှာသင့်ရဲ့လက်မှတ်ရဖို့များပါတယ်လျှင်အံ့သြစရာအထူးလျှော့စျေးပူဇော်, သငျသညျနံနကျစောစောကြိုတင်ရှာရန်ရှိသည်. အစောပိုင်းကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင် သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံကယ်တင် အချိန်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းအပေါ်စဉ်အတွင်းမျှမျှတတမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုထိရောက်သောလမ်းအတွက်.
သူတို့ရဲ့ခရီးသွားလာနေစဉ်အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားနေရာများသို့သွားရောက်ခြင်း Preferences သူကိုလူအတော်များများရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, ငါတို့သည်သင်တို့ကွဲပြားခြားနားထင်နှင့်အစဉ်အလာလမ်းကြောင်းများနှင့်အရပ်တို့ကိုကျော်လွန်သွားပါအကြံပြု. ဟုတ်ကဲ့, သင်မှန်သည်ကြား. သငျသညျနံနကျစောစောသမားရိုးကျမဟုတ်သောအရပ်တို့ကိုအဘို့သင့်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်လျှင်မြင်မှဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာရှိပါတယ်, သငျသညျရစေခြင်းငှါ, အကျိုးအမြတ်အထူးလျှော့စျေး အလွယ်တကူ. ဒါကြောင့်သင်ကအစောပိုင်းကစီစဉ်ဖို့ရှိသည်ဆိုပါက.
ကောင်းစွာ, သင်အကြောင်းကိုကြားသိကြပြီမဟုတ်ပါလျှင် ရထား 'passes, ဒီဥရောပမှာခရီးသွားနေစဉ်သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေပေါ်တွင်သင်၏ပိုက်ဆံချွေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် သငျသညျထကျပိုအဘို့ခရီးထွက်လျှင် 14 ရက်ပေါင်း. သင်တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခု၌သင်တို့၏ခရီးစဉ်ကိုခံစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုင်မလုံလောက်သောအထူးလျှော့စျေးရနိုင်, သို့သော်သင်နည်းသည်များအတွက်သွားလာလျှင်, ထို့နောက် တစ်ခုတည်းရထားလက်မှတ်တွေ ကြောင်းကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအပေါ်ကိုကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသည်ဈေးအပေါဆုံးဖြေရှင်းချက်များမှာ.
အထက်ဖော်ပြပါအကြံပြုချက်များကိုသငျသညျအရကူညီသင်တို့သည်ငါတို့၏အံ့သြဖွယ်ရထားခရီးဓာတ်ပုံများကိုအချို့ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောအခြေခံနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်, စစ်ဆေးခြင်း တစ်ဦးကရထား Instagram ကို Save we offer you the စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်တွေ တွင် ဥရောပ!
တစ်ဦးရထား Save တစ်ဦးလျှော့စျေးနှုန်းမှာသင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေ၏အစောပိုင်းဘွတ်ကင်တစ်မူထူးခြားတဲ့ပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်အွန်လိုင်းကသင်၏ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်မှအများဆုံးကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာလမ်းရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးဤနေရာတွင်အဆုံးသတ်. သင်၏နောက်ဘွတ်ကင်အဘို့အပေါ်အပိုအထူးလျှော့စျေးရရန် link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, တစ်ဦးကရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/essential-tips-to-save-your-money-on-train-tickets-while-going-on-a-europe-tour/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / နှင့်အခြားဘာသာစကားများရန် / pl ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#cheaktickets savemoney ရထားလက်မှတ်တွေ traveltips